राष्ट्रिय – Page 10 – BIG FM 101.2 MHz
Home » राष्ट्रिय (page 10)
कम्युनिस्ट सरकार कमाउ धन्दा गर्नेलाई मात्रै पोस्दै छ:नेता पौडेल
३ साउन, मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्ट सरकार कमाउ धन्दामा लागेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, मकवानपुरले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकार कमाउ धन्दा गर्नेलाई मात्रै पोस्दै छ । यो कुराको पुष्टि सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेययकबाट हुन्छ ।’ गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेको आवश्यकता …
डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन गएको टोलीलाई स्थानीयको अवरोध
काठमाडौं, साउन ३ । जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन गएको सरकारी टोलीलाई स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत रहेका डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउनका लागि बिहीबार हेलिकोप्टर लिएर गएको सरकारी टोलीलाई स्थानीयले डा. केसी रहेको कक्षमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । केसी रहेको कक्षमा पुग्ने बाटो, भर्‍याङलगायतमा मानव साङ्लो बनाएर स्थानीय युवायुवती …
यस्तो छ पोखरामा आज प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रम
पोखरा,३ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज पोखरा आईपुगेका छन् । पोखरा एयरपोर्टमा ल्याण्ड भएका उनलाई पोखरामा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । उनले गण्डकी प्रदेशको सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । प्रदेशसभा गठन भएको ६ महिनापछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सभालाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । संविधान र नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने विषय स्पष्ट किटान छैन । यद्यपी सभालाई सम्बोधन …
गोरखामा पहिरोले घर भत्किँदा तीन जनाको मृत्यु, दुई घाइते
गोरखा । शहीद लखन थापा गाउँपालिका–६ अँधेरीमा पहिरोले घर भत्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय नवराज कुँवरको घर भत्किँदा उनकी छोरी १० वर्षीया प्रमिना, भान्जी २० वर्षीया सरु र सरुकी आठ महिने छोराको मृत्यु भएको स्थानीय कृष्ण कुँवरले जानकारी दिए । पहिरोले बिहान साढे ६ बजेतिर घर भत्किएको हो। घटनामा अन्य दुई जना घाइते भएको उनले बताए । सो गाउँमा …
सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको कर विरुद्द नेपाल विद्यार्थी संघको बिरोध
२ साउन, काठमाडाैं । सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले बिरोध जनाएको । इन्टरनेटमा लगाइएको कर फिर्ता गर्न भन्दै नेविसंघले बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयको अगाडि धर्नासमेत दिएका छन् । चुनाव प्रचारमा फ्री वाइफाइको नारा लिएर गाउँगाउँमा गएको कम्युनिस्टहरूको सरकारले थप शुल्क बढाएको भन्दै विद्यार्थीहरुले खबरदारी सुरु गरेका हुन् । इन्टरनेट सेवामा पनि सरकारले १३ प्रतिशत …
२ साउन, काठमाडौं ।नेपाल चिकित्सक संघले भोलि बिहीबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको संघको ठहर छ । सरकारी वार्ता टोलीलाई पूर्ण अधिकार नदिई डा. केसीलाई जबरजस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने परिस्थितिमात्र सजना गर्न वार्तामा बसेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको संघले …
प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार पोखरा आउदै,गण्डकी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने
पोखरा, २ साउन /प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यतालिका तयार गरिसकेको छ । उनले अधिकांश प्रदेशसभामा सम्बोधन गरिसकेका छन् । नयाँ संरचना बनेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सभालाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । पोखरा विश्व विद्यालयको १९ औ बैठकमा भाग लिन आउन लागेका प्रधानमन्त्रीले बैठक पछि प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने …
राजधानीमै डुबान, करीब सय जनाको उद्धार, बालकोट जोड्ने पुल बगायो
भक्तपुर –अविरल वर्षासँगै हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले भक्तपुर डुबानमा परेको छ । अरनिको राजमार्गस्थित राधेराधे र भाटभटेनी सुपरमार्केट क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परेका हुन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका – ७ मझुवा टोलमा घरमाथिको ढिस्को खसेर थिच्दा एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ७० वर्षीय हिराबहादुर लामा, उनकी श्रीमती ६५ वर्षीया दानमाया लामा र नातिनी अढाइ वर्षकी …
पोखरातर्फ आउँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटना
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको भालेबासमा बिहीबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा २६ यात्रु घाइते भएका छन् । घटनामा ५ यात्रु गम्भीर घाइते भएका छन् । भैरहवाबाट पोखरा हुँदै बाग्लुङ्ग आउँदै गरेको लु१ख ७२७२ नम्बरको बस तानसेन नगरपालिका–८ मा दुघर्टनामा परेको हो। घाइते सबैको तानसेन प्रभासस्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। पाल्पाबाट नेपालगञ्ज छुटेको लु १ ख ८१२७ नम्बरको बसले घुम्तीमा साइड …